Android လုလင်: IMEIမှာ invalid ဖြစ်သွားတာကိုဖြေရှင်းနည်းလေးပါ.
IMEIမှာ invalid ဖြစ်သွားတာကိုဖြေရှင်းနည်းလေးပါ...
( ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောဖို့ကျန်ခဲ့ပါတယ်IMEIပျောက်သွားပေမယ့်ဖုန်းရဲ့batteryကိုချွတ်ပြီးကြည့်ရင်ပဲဖြစစ်ဖြစ်....ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါပါလာတဲ့ဖုန်းရဲ့ဘူးခွံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်IMEIနံပါတ်ကရှိပါတယ်...ဘော့ပင်နဲ့စာရွက်အလွတ်ကလေးတစ်ရွက်ယူပြီးကူးယူလိုက်ပါ)စောနကျွန်တော်ပြောသလို.telephony.connectivityပေါ်လာရင်connectivityခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာCDS informationဆိုတာရှိပါတယ်..အထဲဆက်ဝင်လိုက်ပါ...ပြီးရင်radio informationထဲဆက်ဝင်လိုက်ပါ.
ပြီးရင်..EGMR1.7"စောနကူးယူထားတဲ့IMEIနံပါတ်"ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ SEND ATကိုနှိပ်ကြည့်ပါ
4.နောက်ဆုံးအဆင့်ဘယ်မှပြန်မထွက်ပဲpower keyကိုကြာကြာနှိပ်ပြီး ဖုန်းကိုrebootဆင်းလိုက်ပါ...ပြန်တက်လာတဲ့အခါphone iconလေးကိုနှိပ်ပြီး..
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ........... Credit: U Lay Gyi
အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။
ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 6:30 AM ရေးသားသူ Android လုလင်
Wailiun Oo December 22, 2014 at 11:30 PM
အစ်ကိုပေးတဲ့နည်းနှဲ့ ကျွန်တော် ဖုန်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်..အစ်ကို..
Cherry Mobile Emerald S710 MT6572 ပါ..
Andriod logo မှာ ရပ်နေလို့.. လုပ်မတက်တာနှဲ့ မှားပြီး..MT6572_Android_scatter_emmc_DH နှဲ့ Firmware ပြန်တင်လိုက်မိတယ်.. ပြန်တက်လာတော့.. imei null ဖြစ်သွားတယ်..အစ်ကို..
အစ်ကိုနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်တယ်မရပါဘူး.. imei writer tools နှဲ့ထည့်လည်းမရဘူး..ဖြစ်နေတယ်.အစ်ကို အခြားနည်းများရှိရင်.. ကူညီပေးပါဦး..
Kyaw Ko Ko January 7, 2015 at 7:08 PM
S T Lwin January 10, 2015 at 6:26 PM
thet maung maung February 22, 2015 at 12:25 PM
Huawei G6-U00 WCDMA ကဒ်​မဖက်​​တာဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲဗျ
zaw April 25, 2015 at 6:10 PM
nsk nsk October 29, 2016 at 10:49 AM
မင်းမေသောက်ပက် ဒီတိုင်းမထားနဲ့ ငါလိုးပေးမယ် လီးပဲ
nsk nsk October 29, 2016 at 10:50 AM
kolay love September 24, 2015 at 12:48 PM
Mical Kyaw Lay April 22, 2017 at 9:35 AM
ွှThoon Khant October 30, 2015 at 10:35 AM
အစ်ကို G610 U00 SIM Invalid ပြနေတယ် အစ်ကိုပြောသလိုလုပ်တာမရဘူး ကူညီပါအုန်း အစ်ကို
Phyo Kyaw October 30, 2015 at 12:03 PM
Vivo ​ဈေးနှုန်း​လေးများ ​ပြောပြကြပါလား အစ်​ကိုတို့
Nyein Ko May 1, 2016 at 7:15 PM
အကိုကျွန်တော်ဖုန်းက oppo A11 ပါ
စက်ကCamera အောက်လောက်ကinternet သုံးရင် တအားပူလာတယ် ကျွန်တော်internet ဖွင့်ပြီး20/25minutes လောက်ဆိုဖြစ်တာ
အဲဒါပြီး line bar တွေပျောက်ကုန်တယ် တော်တော်နဲ့ပြန်တက်မလာဘူး 5minutes 10minutesလောက်ကြာတယ်အဲဒါဘာလုပ်သင့်လဲအကြံလေးပေးပါ
စစ်ကိုင်း သား May 28, 2016 at 12:24 PM
 Open Phone Dialer and enter *#*#3646633#*#*.
By entering this you will enter 'Engineer Mode' of the device.
Note : "Misconfiguration in engineer mode can cause damage
 In engineer mode go to CDS Information
 Click on Radio Information
 Select Phone 1 for Ist imei (Phone2for IInd imei)
 At the top on command line type EGMR=1,7,"IMEI" after AT+ (please type 15 digit valid 1st imei number within quote " as shown)
 Hit send command
Wrong way: AT+EGMR=1,7,1234567890XXX15 (Don't put imei without quotes)
Correct way: AT+EGMR=1,7,"1234567890XXX15" (please put imei between " " Don't Ignore Special Characters)
 For 2nd imei number type after AT+EGMR=1,10,"IMEI_2" (put your 15 digit 2nd imei number in place of "IMEI_2"
mgpyuelove mgpyuelove June 13, 2016 at 10:45 AM
Tun Naing June 19, 2016 at 10:20 AM
g520-5000 က imei null နေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ firmware ရေးပြီပြီ မရလို့ပါ help me
Sithu Nyunt August 17, 2016 at 4:56 PM
*#*#3646633#*#* ကုဒ်ကဘယ် ဖုန်းအမျိုးအစားအတွက်လဲ
aung myo September 20, 2016 at 8:31 AM
ကျေးဇူးပါ ရတဲ့ဖုန်းရပါတယ် ပညာတခုရတာပေါ့ အကို
mmtz zaw October 3, 2016 at 8:16 PM
Huawei G610 Uoo မှာဒီကုတ်ထည့်တာဘာမပေါ်ဘူး*#*#3646633#*#*
Naing Naing January 8, 2017 at 1:38 AM
H30-U10 China အလုံးအဆင်​​မ​ပြေဘူး ဘယ်​လိုဆက်​လုပ်​ရမလဲ​ပြောပြ​ပေးပါ။
toulluhtun January 23, 2017 at 12:22 AM
pho shan July 24, 2017 at 10:16 PM
g6-uoo wcdm ဖတ်အောင် လုပ် ရရင် ဘာပေးမလဲ
kaunghtet 2005001 November 12, 2017 at 9:47 AM
Coolpad 7060 ကို fw ​တွေလဲစုံ​နေပြီ imei error တက်​​နေတုန်​ပဲ error ကင်းတဲ့ imei error fix ​လေးရှိရင်​ မစပါအုံး ဆရာရယ့